बिश्वबन्धु भण्डारी, प्रकाशित मिति : २०७३ जेठ २ आइतबार , १,०६३,२१५ पटक हेरिएको
वेब फोटो : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, आफ्नो पति स्व.मदन भण्डारीका साथ
काठमाडौं । आज जेठ दुई गते । विहान उठेर क्यालेण्डर हेर्दा जेठ दुई देख्ना साथ संझे मैले उनै नेपाली भुमीका महान जननेता मदन भण्डारीलाई । त्यतिवेला म जहाँ थिएँ, त्यहीबाट तत्काल उठेर एक मिनेट मौन धारण गरेँ उनको आत्माको चिर शान्तिको लागि । भोली जेठ तिन गते उनको हत्या भएको दिन ।
अहिलेकी राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति उनै मदनकी जीवनसंगीनी र राजनीतिक सहयात्री विद्यादेवी भण्डारी छिन् भने मुलुकको सवै भन्दा शक्तिशाली व्यक्ति उनै मदनका राजनीतिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली छन्। प्रधानमन्त्री ओली मदनको हत्याको छानवीन गर्न त्यतिवेला गठित आयोगका अध्यक्ष समेत हुन्। ओलीले कुनै बेला भनेका थिए– म सरकारमा गएभने भण्डारीका हत्यारा अवश्य पत्ता लगाउँछु। आज ओली मात्रै नभएर विद्या समेत राज्यको सर्वोच्च पदमा छिन्। प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ– के मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लाग्लान ?
उनी देशको मुहार फेर्ने खाका र राष्ट्रियताका सवालमा वैचारिक रुपमा सुस्पष्ट थिए। एमालेको महासचिव रहेकै बेला तिनै अद्भुत नेताको रहस्यमय हत्या भएको आज २३ बर्ष भईसक्यो। वि.सं. २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा जिप दुर्घटनामा परी उनको निधन भएको थियो। तर त्यो दुर्घटनालाई भने रहस्यमय र मदन भण्डारीको हत्या योजना अनुरुप भएको मानिएको छ। दुर्घटनामा मदनसंगै रहेका एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। तर जिपका चालक अमर लामा भने दुर्घटनामा परेर पनि जिवितै फर्किन सफल भए। उनको पनि २०६० सालमा रहस्यमय हत्या भयो। ति तिनै जनाको हत्याको रहस्य अझै सम्म पनि पत्ता लागेको छैन।
मदनकी पत्नी तथा नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले गत कात्तिक १३ गते बिहीबार राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको सपथ र पदभार ग्रहण गरिकी छन्। विद्याले २०३९ सालमा तत्कालिन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीसित भूमिगत रुपमै विवाह गरेकी थिइन् । मदन र विद्यादेवीका दुई छोरीहरु उषाकिरण र निशाकुशुम भण्डारी छन्। विद्याले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको दिन पनि मदन र विद्याकी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीले आफ्नो पिताको मृत्युलाई हत्या भएको बताएकी थिईन्।
उक्त घटनालाई हत्या भएको ठहर गर्दै कांग्रेसी सरकारका विरुद्धमा गरेको आन्दोलनपछि बनेको एमालेको सरकारले कांग्रेसी सरकारका विरुद्धमा अघि सारिएको प्रमुख मागका रुपमा रहेको दासढुंगा छानविनको बुँदा आफ्नो मागपत्रबाट एकाएक गायव पारिदियो। न त त्यसले आफैँले हत्या घोषित गरेको घटनाको छानविनलाई अघि बढायो न त जेलमा रहेको अमर लामासँग एक पटक पनि बयान लिने प्रयास गर्यो। त्यसैले एमालेका कार्यकर्ता सहित संपुर्ण नेपालीको मनमा अहिले पनि एउटै प्रश्न छ – किन मदन भण्डारीका हत्यारा खोजिदैन ?
मदनआश्रितको हत्या बारे ओली किन मौन ?
मदनआश्रित हत्याकाण्ड भन्छ : एमाले एजेण्डा विर्सन्छ
मदन–आश्रित पत्रकारिता पुरस्कार चयन समिति गठन